MariaDB 10.7 ကို Debian 11 Bullseye - LinuxCapable တွင် ထည့်သွင်းနည်း
Operating System ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
MariaDB 10.7 GPG Key & Repository ကို တင်သွင်းပါ။
ရွေးချယ်မှု 1 – Mirror ဆာဗာကို အသုံးပြု၍ MariaDB 10.7 ကို တင်သွင်းပါ။
ရွေးချယ်မှု2– Official Bash Script ကို အသုံးပြု၍ MariaDB 10.7 Repo ကို တင်သွင်းပါ။
MariaDB 10.7 ကို Debian တွင် ထည့်သွင်းပါ။
MariaDB 10.7 ဝန်ဆောင်မှု အခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။
လုံခြုံရေး Script ဖြင့် MariaDB 10.7 ကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။
MariaDB 10.7 Instance သို့ ဝင်ရောက်ပါ။
MariaDB 10.7 ကို ဖယ်ရှားနည်း (Uninstall)
MariaDB ၎င်း၏အစပြုသူဘေးရှိ လူကြိုက်အများဆုံး open-source databases တစ်ခုဖြစ်သည်။ က MySQL. မူရင်းဖန်တီးသူများ က MySQL ဖွံ့ဖြိုးပြီး MariaDB အဲဒီကြောက်စိတ်ကို တုံ့ပြန်တယ်။ က MySQL 2010 ခုနှစ်တွင် Oracle က ၎င်းကိုဝယ်ယူခြင်းကြောင့် ရုတ်တရက် အခကြေးငွေပေးရသည့် ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အလားတူနည်းပရိယာယ်များပြုလုပ်သည့် ၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူ MariaDB ၏နောက်ကွယ်ရှိ developer များသည် ၎င်းကို open source အဖြစ်ထားရှိကာ ကြောက်ရွံ့မှုများမှ ကင်းဝေးစေရန် ကတိပြုခဲ့ကြသည်။ က MySQL.
MariaDB သည်ကဲ့သို့ပင် လူကြိုက်များလာသည်။ က MySQL developer များနှင့်အတူအဆင့်မြင့်အစုအဝေးကဲ့သို့အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ Galera Cluster 4ပိုမိုမြန်ဆန်သော ကက်ရှ်/အညွှန်းများ၊ သိုလှောင်မှုအင်ဂျင်များနှင့် သင်မတွေ့နိုင်သော အင်္ဂါရပ်များ/နောက်ဆက်တွဲများ က MySQL.
အောက်ပါ Tutorial တွင် သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ MariaDB 10.7 ကို Debian 11 Bullseye တွင် မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။.
အကြံပြုထားသော OS- Debian 11 Bullseye
သုံးစွဲသူအကောင့်: sudo သို့မဟုတ် root access ပါရှိသော အသုံးပြုသူအကောင့်။
သင့်ရဲ့ဒိတ်လုပ်ပါ debian လက်ရှိ ပက်ကေ့ဂျ်များ အားလုံးကို ခေတ်မီကြောင်း သေချာစေရန် လည်ပတ်မှုစနစ်
ရှိပြီးသား သို့မဟုတ် sudo အကောင့်အသစ်ကို စနစ်ထည့်သွင်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်ခန်းစာတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ Debian ရှိ Sudoers သို့ အသုံးပြုသူအား ထည့်ခြင်း။.
ပထမအဆင့်မှာ တပ်ဆင်မှုအတွက် လိုအပ်သော မှီခိုအားထားမှုကို ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။
ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ သင့် terminal မှာ အောက်ပါ command ကိုသုံးပါ။
MariaDB ကို အောင်မြင်စွာ ထည့်သွင်းရန်၊ သင်သည် MariaDB 10.7 သိုလှောင်မှုကို MariaDB သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သောမှန်များစွာမှ တင်သွင်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ခန်းစာတွင် ရွေးချယ်ရန် ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုကို ပြသပါမည်။
GPG key နှင့် repository ကိုတင်သွင်းရန်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ mirror ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ နမူနာအမိန့်များကို ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် မှန်တည်နေရာ အရေအတွက်ကို သင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာ၊ ဥပမာ၊ 10.6.4 မှ 10.6.5 အကြီးစားထွက်ရှိမှုများအတွက် ရက်အနည်းငယ်မှ တစ်ပတ်နောက်ကျနိုင်သည်။
ပထမဦးစွာ အောက်ပါ command ကို အသုံးပြု၍ GPG ကီးကို တင်သွင်းပါ။
အောင်မြင်ပါက ဥပမာ ထုတ်ပေးသည်-
ထို့နောက် MariaDB 10.7 repository ကိုတင်သွင်းရန် သင့် terminal တွင် command ကို run ပါ။
မှတ်ချက်၊ ဒေါင်းလုဒ်ကြေးမုံတွေ့နိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင် မှ MariaDB ဖောင်ဒေးရှင်း repository အတွက် သင်နှင့် ပိုမိုနီးစပ်သော တည်နေရာကို ရှာဖွေရန်။
ယခုအခါ သော့နှင့် သိုလှောင်ခန်းကို တင်သွင်းပြီးသည့်နောက် ထပ်တိုးအသစ်ကို ထင်ဟပ်စေရန် apt package manager စာရင်းကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
ထို့နောက် ရွေးချယ်မှု2ကိုကျော်ပြီး တပ်ဆင်မှုအပိုင်းသို့ ဆက်သွားပါ။
ဒုတိယရွေးချယ်မှုနှင့် ပိုမိုနှစ်သက်သည်မှာ တရားဝင် bash script ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပြီး မည်သည့် updates များကိုမဆိုတရားဝင်သိုလှောင်ရာနေရာများသို့ဖြန့်ကျက်ပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်းဖြစ်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ဆာဗာများအနီးတွင်မရှိသောအသုံးပြုသူများသည် အချို့သောပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်သော်လည်း အများစုအတွက် ပြဿနာဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။
သင်၏ terminal တွင်၊ အောက်ပါ command ကိုသုံးပါ။
မှတ်ချက်၊ အမိန့်မအောင်မြင်ပါက၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၊ သင်သည် curl package ကို ထည့်သွင်းရန် မေ့သွားနိုင်သည်။
မှတ်သားပါ၊ အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာနှင့် ကိရိယာများကို ကျော်သွားခဲ့သည်။ သင်သည် ဤအလံများကို ဖယ်ရှားနိုင်သော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင်၊ Debian 11 အတွက် ကိရိယာများကို ပံ့ပိုးမထားပါ။ အသုံးပြုသူအများစုသည် ဤအပိုပစ္စည်းများကို မလိုအပ်ပါ။
၎င်းသည် သိုလှောင်မှုအား အောင်မြင်စွာ ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြသသည်။ ထို့နောက် သင်၏ APT သိုလှောင်မှုစာရင်းကို ပြန်လည်စတင်ပါ။
MariaDB ကိုထည့်သွင်းရန်၊ သင်သည် client နှင့် server packages များကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Y ကိုရိုက်ပါ ထို့နောက်နှိပ် ကီးထည့်ပါ။ installation ကိုဆက်လုပ်ရန်။
ဗားရှင်းကိုစစ်ဆေးပြီး တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် MariaDB ၏ တပ်ဆင်မှုကို အတည်ပြုပါ-
ယခု သင် MariaDB ကို ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်၍ အောက်ပါ systemctl အမိန့်ကို အသုံးပြု၍ ဒေတာဘေ့စ်ဆော့ဖ်ဝဲ၏ အခြေအနေကို စစ်ဆေးနိုင်သည်-
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန် MariaDB အခြေအနေကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ မဟုတ်ပါက MariaDB ကိုစတင်ပါ၊ အောက်ပါ command ကိုအသုံးပြုပါ။
စနစ်စတင်မှုတွင် MariaDB ကိုဖွင့်ရန်-
စနစ်စတင်ချိန်တွင် MariaDB ကိုပိတ်ရန်-
MariaDB ဝန်ဆောင်မှုကို ပြန်လည်စတင်ရန်-
install လုပ်သည့်အခါ MariaDB လတ်ဆတ်သော၊ ပုံသေဆက်တင်များကို စံနှုန်းအများစုအရ အားနည်းသည်ဟု ယူဆကြပြီး ဟက်ကာများကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးချခြင်းအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်စေသည်။ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုသည် တပ်ဆင်မှုလုံခြုံရေး script ကို run ရန်ဖြစ်သည်။ MariaDB installation ကို။
ပထမဦးစွာ၊ အောက်ပါ command ကိုအသုံးပြုပါ။ (mysql_secure_installation):
စကားဝှက်ကို သတ်မှတ်ခြင်း။ အမြစ် အကောင့်။
စက်တွင်းရှိအိမ်ရှင်ပြင်ပမှဝင်ရောက်နိုင်သော root အကောင့်များကိုဖယ်ရှားခြင်း။
အမည်မသိအသုံးပြုသူများ ပုံမှန်အားဖြင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် စမ်းသပ်ဒေတာဘေ့စ်ကို ဖယ်ရှားခြင်း။
မှတ်ချက်၊ သင်အသုံးပြုပါ။ (Y ကို) အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်။
ယခုထည့်သွင်းပြီးနောက် တပ်ဆင်မှုလုံခြုံရေး script ကို ပြီးမြောက်ပြီးပါက၊ သင်၏ထဲသို့ ဝင်ပါ။ MariaDB ဒေတာဘေ့စ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
တပ်ဆင်မှု စနစ်ထည့်သွင်းမှု သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုအပြီး လုံခြုံရေး ဇာတ်ညွှန်းတွင် သင်သတ်မှတ်ထားသည့် root စကားဝှက်ကို ထည့်သွင်းရန် သင့်အား သတိပေးပါလိမ့်မည်။ MySQL ဝန်ဆောင်မှု စံနမူနာတွင် ပြီးသည်နှင့် သင်သည် ၎င်းကို လည်ပတ်ကြည့်ရှုရန် အောက်ပါ command ကို စမ်းသပ်မှုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အောက်ပါရိုက်ပါ DATABASE အမိန့်ကို ပြပါ။:
MySQL အသစ်အတွက်၊ commands syntax အားလုံးကို ““;"
Terminal မှထွက်ရန် အောက်ပါတို့ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ထွက်ရန်အမိန့်:
MariaDB ကို အသုံးမပြုချင်တော့ဘဲ ၎င်းကို အပြည့်အဝ ဖယ်ရှားလိုပါက အောက်ပါ command ကို လုပ်ဆောင်ပါ ။
Y ကိုရိုက်ပါ ထို့နောက်နှိပ် ကီးထည့်ပါ။ uninstallation ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်။
ထို့နောက် အပြီးသတ်ဖယ်ရှားရန်အတွက် ထည့်သွင်းထားသည့် သိုလှောင်ရုံများကို ဖယ်ရှားပါ။ သင်သည် 10.6 သို့မဟုတ် အခြားအရင်းအမြစ်သို့ ပြောင်းနေပါက ၎င်းကို သင်ပြုလုပ်လိုပေမည်။
ပထမဆုံး၊ အကယ်၍ သင်သည် mirror method ကိုအသုံးပြု၍ MariaDB 10.7 ကိုထည့်သွင်းပါက၊ အောက်ပါ command ကိုအသုံးပြုပါ။ - ဖယ်ရှားရေးအလံ အခု ထပ်ထည့်တယ်။
bash script repository ကို ဖယ်ရှားရန် အောက်ပါ command ကို အသုံးပြုပါ။
သင့်စနစ်အားရှင်းလင်းရာတွင်ကူညီရန် MariaDB တပ်ဆင်မှုတွင် အသုံးမပြုသောမှီခိုမှုအများစုကို ဤ command မှဖယ်ရှားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။
သင်ခန်းစာတွင်၊ နောက်ဆုံးထွက်တည်ငြိမ်သောထွက်ရှိမှု Debian 10.7 Bullseye တွင် MariaDB 11 ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ သင်သည် 10.5 သို့မရွေ့သေးပါက 10.6 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယခုအချိန်တွင် လွန်စွာကောင်းမွန်သောကြောင့် သင်သည် တည်ငြိမ်သော 10.7 မှ အဆင့်မြှင့်မည်ဆိုပါက အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အတူ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် များစွာသော အားသာချက်များရှိပါသည်။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုပြုလုပ်ပါက၊ ဒေတာဘေ့စ်ထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် အဆင့်မြှင့်တင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်အရာတွင်မဆို မရေမတွက်နိုင်သော နာကျင်မှုများနှင့် အပြည့်အဝစိတ်ပျက်စရာများကို ရှောင်ရှားရန် ထိုသို့မလုပ်ဆောင်မီ သင့်ဒေတာဘေ့စ်ကို အမြဲအရန်ကူးထားပါ။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား debian Tags: Debian 11 Bullseye, MariaDB post navigation
Ubuntu 10.7 တွင် MariaDB 20.04 ကို ထည့်သွင်းနည်း